Flip-ka Remedy-ka ee Digital-ka ayaa Sameeya Iibinta, Maareynta, Hagaajinta, iyo Cabbirka Xayeysiinta Dheeraadka ah (OTT) | Martech Zone
Flip-ka Remedy Digital wuxuu ka dhigayaa Iibinta, Maareynta, Hagaajinta, iyo Cabbirka Xayeysiinta Dheeraadka ah (OTT)
Arbacada, Agoosto 25, 2021 Arbacada, Agoosto 25, 2021 David Zapletal
Qaraxii ka dhacay dookhyada warbaahinta ee sii qulqulaya, nuxurka, iyo daawadayaasha sanadkii la soo dhaafay ayaa sameeyay Kor-Sare-Dhaaf (Ott) xayeysiis aan macquul ahayn in la iska indho tiro sumadaha iyo wakaaladaha matala.
Waa maxay OTT?
OTT waxaa loola jeedaa adeegyo warbaahineed oo soo bandhigaya war-bixinno dhaqameed waqtiga dhabta ah ama baahida loo qabo intarneedka. Ereyga dusha sare waxay tilmaamaysaa in bixiyaha maadada uu ka sarreeyo adeegyada caadiga ah ee internetka sida daalacashada webka, iimaylka, iwm.
Xadhigga oo si dhab ah u bilaabmay ka hor masiibada ayaa si xawli ah u dardargashay iyadoo lagu qiyaasay 6.6 milyan oo qoys ayaa xadhigga ka jaraya sanadkii la soo dhaafay, taasoo ka dhigaysa ku dhawaad ​​afar meelood meel qoysaska Maraykanka xadhig la'aan. Mid kale 27% ayaa la filayaa inay sidaas oo kale sameeyaan in 2021.
Iyada oo qulqulka hadda lagu xisaabtamayo ku dhawaad ​​70% daawashada TV -ga, dhagaystayaashan baaxadda leh ayaa aad uga fiirsanaya xayeysiiyaasha. Kharashka ku baxaya xayaysiiska OTT ayaa la filayaa inuu boodo laga bilaabo $ 990 milyan sannadka 2020 illaa $ 2.37 bilyan marka la gaaro 2025, si tartiib tartiib ah ayuu ugu sii qulqulayaa xagga sare ee TV -ga tooska ah ee kharashaadka.
In kasta oo ay jirto fursad aad u weyn, fulinta xayeysiiska OTT waxay caqabad ku noqon kartaa sumcadaha iyo wakaaladaha waaweyn iyo kuwa yaryar labadaba. Iyada oo leh aagag badan, way adag tahay in la ogaado midka la dooranayo. Maareynta cilaaqaadyada daabacayaasha badan waa wax dhib badan oo way adkaan kartaa in la raaco cabbirrada saxda ah si loo ogaado waxa shaqeynaya iyo waxa aan shaqeynin.
Si loo xalliyo caqabaddaas, Flip, madal waxqabadka OTT oo ka yimid Remedy Digital, wuxuu bixiyaa hab caqli badan oo wax lagu iibsado, loo maareeyo, loona hagaajiyo ololaha OTT. Laakiin marka laga soo tago kaliya heerarka dhammaystirka fiidiyaha, madalkan abaalmarinta ah ee Digiday wuxuu siiyaa magacyo aragtiyo faahfaahsan oo ku saabsan hal-abuurka ugu sarreeya, juqraafiyada, daabacayaasha, qaybaha maalinlaha ah, iyo in ka badan. Waxay bixisaa astaan ​​buuxda, kor u qaadista sumadda, iyo falanqaynta kor u qaadista si loo ogeysiiyo xayeysiiyayaashu inay ogaadaan oo kaliya ololeyaasha ay wadaan natiijooyinka (iyo sida), laakiin waxay gelisaa fikradahaas inay isla markiiba shaqeeyaan, iyagoo u wanaajinaya ololaha waqtiga-dhabta ah xagga doorsoomayaasha ugu sarreeya. Xalka adeegga buuxa wuxuu qabtaa dhammaan wareegga nolosha xayaysiinta ee OTT, oo awood u siineysa magacyada iyo wakaaladaha cabbir kasta inay ka faa'iideystaan ​​fursadda OTT si fudud.
Xigasho toos ah oo ka timid Inventory Premium
Iyada oo loo marayo iskaashiyo warshadeed oo ballaaran, summadaha iyo wakaaladuhu waxay si toos ah u helaan marin -u -siiyaha kasta ee ugu sarreeya OTT si loo kordhiyo gaarsiinta dhagaystayaasha. Mashruuca Flip wuxuu ka faa'iidaystaa xog badan oo hodan ah si loo huriyo kobcinta waqtiga-dhabta ah, hubinta in ololeyaashu ay u fulinayaan awooddooda buuxda iyada oo la siinayo aragtiyo qoto dheer oo laga faa'iidaysto miisaaniyadda xayeysiiyaha. Sababtoo ah ma jiro dhex -dhexaad, magacyadu waxay helaan qiimaha ugu wax ku oolka badan ee suurtogalka ah, iyagoo abuuraya ROI ka sarreeya oo ku soo noqda qarashka xayeysiiska (ROAS). Sababtoo ah dhammaan istiraatiijiyadda OTT waxaa lagu maamulaa Flip gudaheeda, looma baahna in lagu dhibtoodo xiriiryo iibiyayaal badan ama qandaraasyo. Waa wax fudud, isku -dhafan, oo hufan.
Cabbira Falalka, Ma aha Aragtiyo Kaliya
Marka cabbirka OTT uu sii socdo si uu u bislaado, magacyadu waxay rabaan inay eegaan wixii ka dambeeya heerarka dhammaystirka fiidiyaha (laba -lab ah haa/maya), gujin, iyo aragtiyo. Dhammaadka maalinta, xayeysiiyayaashu waxay rabaan inay ogaadaan sida ololahoodu u wado natiijooyin la qiyaasi karo, iyo ugu dambayn, iibinta. Flip wuxuu awoodaa inuu ku xiro dhibcahaas, si loo cabbiro KPI-yada sida soo dejinta barnaamijka, booqashooyinka websaydhka, gawaarida wax iibsiga oo la bilaabay, iyo xitaa booqashooyinka dukaanka dhexdiisa. Madalku wuxuu ku xiraa aragtida natiijada dhabta ah ee xayeysiiska, si aad u aragto waxa shaqeynaya iyo waxa aan shaqeynin.
Kani waa mid ka mid ah astaamaha muhiimka ah ee xalkayaga ka dhigaya mid gaar ah - waxaan ku xiri karnaa natiijada xayeysiiska oo aan ku qaban karnaa qalab kasta, si aad u aragto waxa runtii irbadda dhaqaajinaya. Taasi waxay ka dhigan tahay inaad heshid aragtiyo dhab ah, oo waxqabad leh si aad isbeddel macno leh ugu samayso ololahaaga si aad u gaarto yoolalkaaga ganacsi ee hoose.
Michael Seiman, Maamulaha Daweynta Dijital ah
Macluumaad Ballaadhan Oo Ku Saabsan Fahanka Dheer
Badeecadaha badankoodu waxay marin u helaan xogtooda macaamilka qaybta koowaad waana taas-waxba kama jiraan macaamiisha kula tartameysa ama xitaa macaamiisha iman karta. Iyada oo leh Flip, waxaad la imaan kartaa xogtaada oo aad ku dari kartaa Digital Remedy ilaha xogta dhinac saddexaad ee ballaaran oo aad uga faa'iideysan kartaa xogtan ballaaran ee loogu talagalay bartilmaameedka iyo tebinta dhagaystayaasha aadka loo safeeyay. Taas macnaheedu waa inaad ka faa'iideysan karto xogta tartamayaashaada si aad u hesho natiijooyin wanaagsan.
Natiijooyinka Kor u qaadista Calaamadda waqtiga-dhabta ah
Marka laga soo tago aragtida kaliya iyo beddelaad-ka-hooseeya, Flip wuxuu kaloo u oggolaanayaa suuq-ilaaliyayaashu inay la socdaan kor-u-qaadista sumadda iyagoo isku daraya cabbirrada ka-qaybgalka OTT oo leh aragtiyo ku saleysan sahan si loo cabbiro wacyiga, xusuusta, iyo aragtida. Markaa xitaa kuwa aan weli is -beddelin, Flip wuxuu kuu oggolaanayaa inaad garaacdo garaaca sumcadda si aad u aragto in xayeysiisyadaadu ay la jaan qaadayaan dhagaystayaasha aad beegsanayso.
Ogow Waxa Dhabarka Dhaqaajiya Cirbadda
Xayeysiinta dhijitaalka ah, waxaa jira doorsoomayaal badan oo loo aanayn karo guusha ololaha. Runtu waxay tahay, dhagaystayaashu way awoodaan, oo ay u badan tahay, inay la kulmaan xayeysiisyadaada kanaallada kale ee warbaahinta si isku mid ah inta lagu jiro ololahaaga OTT. Miyaanay fiicnaan lahayn in la tilmaamo qaybaha ololahaagu dhab ahaantii ay wadaan natiijooyinka? Iyada oo leh Flip, summaddu waxay ka jawaabi karaan su'aasha: qof kasta oo tallaabo qaaday, meeqa ka mid ah ayaa sidaas sameeyay sababta oo ah soo -gaadhista OTT gaar ahaan? Flip wuxuu bixiyaa cabbirrada kor u qaadista qoto-dheer, cabbiridda iyo aqoonsiga doorsoomayaasha ololahaaga ee saamaynta ugu badan ku leh khadkaaga hoose ee dariiqa macmiilka si aad u iibsato. Waxay bixisaa heer sarreyn ah iyada oo la go'doominayo saamaynta iyo dejinta qiimaha OTT ee ololahaaga guud. Markaan isbarbar dhig ku sameyno qiimayaasha is -beddelka ee kooxaha soo ifbaxay iyo kuwa koontaroolaya ee ku jira doorsoomayaasha sida hal -abuurka, daabacayaasha, iyo dhagaystayaasha, waxaan awoodnaa inaan aragno inta ay u badan tahay in qof beddeli karo marka lagu soo bandhigo xayeysiiskaaga OTT ama ku saleysan doorsoomayaasha ololaha qaarkood.
Tobaneeyo sano oo Khibrad ah Dhinacaaga
Mashiinka ayaa kaliya u caqli badan sida aadanaha gadaashiisa, kooxda Digital Remedy waxay ka shaqeynayeen fiidiyaha iyo OTT tan iyo ka hor intaadan wax la socon. Iyagoo in ka badan 20 sano ku jiray goobta dhijitaalka ah, waxay ka fulinayeen dhammaan noocyada warbaahinta, tan iyo markii aad dib u noqotey inaad weli gacanta ku hagaajiso. Iyada oo ku dhawaad ​​shan sano oo ku jirta booska OTT laftiisa, aqoontan hay'addu waxay ka dhigan tahay inaad hesho tikniyoolajiyad ku shaqaysa xogta taas oo ay taageereen khibrad qoto dheer oo ka timid xirfadlayaal dhinaca kale u ahaa suuqgeeyayaal naftooda oo leh faham qoto dheer oo ah cabbirrada ay xayeysiiyayaashu runtii rabaan in la arko. Socodka shaqada, muuqaalaynta, iyo ka warbixinta ayaa dhammaantood laga dhisay aragtida macmiilka si loo siiyo aragtiyaha aad u baahan tahay si aad si buuxda u fahamto waxqabadka ololaha.
Ku soo boodida dhexdhexaad cusub sida OTT waxay u muuqan kartaa mid aad u culus, gaar ahaan cadaadiska dheeraadka ah ee ogaanshaha inaadan runtii lahayn ikhtiyaar - waa halka ay dhagaystayaashaada iyo tartamayaashu u socdaan. Laakiin aaladda saxda ah iyo khibradda geeskaaga, xitaa noocyada ugu yar iyo shirkadaha ayaa kula tartami kara ragga waaweyn kanaalkan cusub ee kulul. Iyada oo la adeegsanayo Flip OTT platform, Digital Remedy wuxuu ka dhigayaa mid la heli karo, fudud, oo la awoodi karo sumadaha iyo suuqgeeyayaasha heerarka oo dhan si loogu guuleysto OTT.
Jadwalka Demo ee Flip Remedy Remedy
Tags: adtechdaawo dhijitaal ahflipOctoberott ad gadashadamaamulka xayeysiiska ottxayaysiisyada ottxayaysiis ottfalanqaynta ottmaaraynta ololaha ottwanaajinta ololaha ottololaha ottdusha sare
Halyeeygii Remedy Digital-ka ahaa ee 15-sano ahaa, Zapletal wuxuu ugu dambeeyay noqday madaxa Innovation & Sarkaalka Warbaahinta muddo ka badan hal sano kadib markii uu markii hore ku biiray shirkadda EVP ee Iibsashada Warbaahinta iyo Hagaajinta. Kaalintiisii ​​ugu dambaysay, khibradda Zapletal iyo saamayntiisu waxay muhiim u ahaayeen horumarinta aasaaska Daawada Dijital ah Xalalka AdReady+ iyo Flip, kaliya maahan hogaaminta kooxaha isdhaafsan iyo kuwa la qaybiyey laakiin sidoo kale miiska keenaya khibradiisa shaqsiyeed ee howlaha warbaahinta, oo ay weheliso fahamkiisa qoto dheer ee baahiyaha macaamiisha iyo dhibcaha xanuunka.